काठमाडौँ। झूठ या सही जे होस्, मनमा लागेको कुरा बोल्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पार्ने मामिलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माहिर छन्। तेस्तै ओलीबारे सत्य तर अति गोप्य सूचना लिक भएको छ।
कहिले चितवन–ठोरीमा भगवान राम जन्मिएको दावी त कहिले द्वन्द्वताका बाबुरामकी छोरी अरुको खर्चले विदेशमा पढिरहेको दावी गर्ने उनले फेरि त्यस्तै ‘फण्डा’ निकालेका छन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिका नाममा।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रतर्फ इंगित गर्दै ओलीले ‘पाँच बुँदे सहमतिका आधारमा ०६१ माघ १९ को घटना भएको आरोप काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो वासिङ्गटन प्रशासन र गुप्तचर निकाय सिआइएलाई गरेको रिपोर्टिङका आधारमा लगाएका हुन्।
तर, उनी आफैँचाहिँ कतिसम्मको रहेछन भन्ने कुरा पनि त्यही निकायको रिपोर्ट पढ्दा छर्लंग हुन्छ। हरेक देशमा तैनाथ विदेशी दूतावासले प्राप्त सूचना र सोको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो तालुकवाला निकायलाई दैनिक प्रतिवेदन पठाउने गर्दछन्।
त्यो विशुद्ध उसको खपतका लागि हुने गर्छ। जसको सम्बन्धित देशसँग कुनै लेनादेना नै हुँदैन। ती कूटनीतिक नियोगले पठाएका सबै रिपोर्ट यदि सत्य हुन्थे भने एमाले नेता भीम रावल र कांग्रेसबाट पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सोझै अमेरिकी एजेन्ट करार गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनकि,विकिलिक्सद्वारा छरपष्ट सन् २००९ जुन १८ विहिबार बिहान सवा नौ बजेको एउटा गोप्य रिपोर्टमा भीम रावललाई दूतावासको निकट सम्पर्कका ब्यक्ति भनी किटान गरिएको छ।
अब दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले बताउनु पर्यो के यही हो त वास्तविकता ? केपी ओलीको सबै बोलीका प्रमाण नहुने त देखिँदै आएको हो। प्रमाण मानिने लिखत आलोपालो प्रधानमन्त्री त नटेर्ने उनी कुनै राजनीतिज्ञ संग तुलना गर्न सकिदैन।
आफैँ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पदीय मर्यादाविपरित विदेशीलाई अनेकन चुक्ली लगाएको पनि विकिलिक्सले खुलासा गरेको छ। विदेश सम्बन्धमा सन्तुलन राख्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रीकै हैसियतमा उनले अमेरिकी राजदूत समक्ष उल्टै आफ्नो पार्टीका नेतामाथि भएनभएका आरोप लगाएका छन्।
हिजो पूर्वराजा र माओवादीहरुले आफ्नो पक्षमा राजनीति पार्नलाई केही न केही गरे वा गरेनन्, त्यो उनीहरुले नै जान्ने कुरा भयो। तर आफ्नै पार्टीका नेताबारे पनि उनले नानाभाँती कुरा गरेको त्यही गोप्य रिपोर्टमा भेटिन्छ, यसलाई के भन्ने ?
प्रायः एमाले नेता देशको हैन, आफ्नो मात्रै हित सोच्ने खालका छन्। ओलीले राजदूतलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले आफ्नो फोन नउठाएको सम्मका गुनासो पोखेको पाइन्छ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको सरकारमा भीम रावल गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि दूतावासले फेरि आफ्नो देशलाई लेख्यो, उहाँ हाम्रो निकट सम्पर्कको व्यक्ति हुनुहुन्छ। लेखिएको छ।
अति गोप्य इमेल हो त्यो। सन् २००७ जनवरी २५ को विहान ९ बजेर ४ मीनेट जाँदा राजदूतको तर्फबाट गरिएको ७८ सय ९२ अक्षरयुक्त टेलिग्राम केवलमा यो कुरा प्रष्टसँग लेखिएको थियो।
अमेरिका मात्र हैन ओलीले आफ्नो अनुकूलताका निम्ति दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका पार्टी एवं सरकारी नेतासामु एमाले पार्टीभित्रको आन्द्राभुँडी छताछुल्ल पार्दै समकालीन सहयोद्धाहरुको उछित्तो काढ्नुभएका प्रमाण त अझ कति छन् कति ?
तेस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न नेकपा एमाले तयार भएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमाले एमसीसी पास गर्न तयार भएको हो।
बिहीबार दिनभर भएका छलफलमा एमाले एमसीसी पास गर्न सकारात्मक देखिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्। एमालेले एमसीसी पास गर्ने भए कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन तोड्नुपर्छ र संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गर्न पर्ने सर्त राखेको छ।
बिहीबार बेलुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि यही शर्त राखेको श्रोतको दावि छ। देउवा गठबन्धन तोडेर आए सरकारमा सहभागी हुने या सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आउँदो जेठमा अर्ली इलेक्सन गर्ने विषयमा छलफल गर्न ओली खुल्ला रहेको बालकोट स्रोतले बताएको छ।
सत्तारुढ चार दलका शीष नेताहरुको बैठकलगतै पत्नी आरजु राणासहित बालकोट पुगेका देउवाले ओलीसँग लामो छलफल गरे। बिहीबार नै सत्तारुढ चार दलको बैठकअघि कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न देउवा आउने सूचना दिएका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेताहरुलाई ‘तपाई कहाँ जाने तय गर्नुस्’ भन्ने गरेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा भने पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।
उनलाई एमसीसी अनुमोदन नगरी पनि भएको छैन । बालकोट जानुअघि बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति मागेका थिए ।
बैठकको सुरुमै उनले आफ्नो लामो कुरा नभएको भन्दै भने, ‘अस्ति तपाईहरुले टेबल गर्न दिन्छु भन्नुभएकै हो, अब टेबल गर्न दिनुस्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुँदा पक्षमा मत दिने कि विपक्षमा भन्ने दलहरुको आफ्नो रोजाई भएको बताएका थिए।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एमसीसी टेबल भए विपक्षमा मत हाल्ने र सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णय मात्र सुनाएनन्, संसद अवरोध कायमै रहेकाले एमसीसी टेबल नमिल्ने बताए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले टेबल गर्न दिने सहमति भएको स्वीकार गरे। तर एमालेले संसद अवरोध कायमै राखेका बेलामा छलफल गर्ने वातावरण नबन्ने र पार्टीको बैठक ७ गते रहेको पनि बताए।